Codashop က Epic Skin အမိုက်စားနဲ့ နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လှမ်းသွားပါပြီ! | Codashop Blog MM
Home News Codashop က Ep...
Codashop က Epic Skin အမိုက်စားနဲ့ နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လှမ်းသွားပါပြီ!
Codashop က ဂိမ်းထဲကဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ လက်နက်တွေကို Next Level ရောက်အောင် စိတ်ကြိုက်အလှဆင်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးစတင်ရာ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းထဲက ဟီးရိုးတွေကို သိပ်ကိုခမ်းနားတဲ့ Skin တွေ၊ ခပ်ပြောင်ပြောင် Skin တွေနဲ့ စိတ်ကြိုက်ဆင်ယင်နိုင်ပြီး လက်နက်တွေကိုလည်း အဆင့်မြှင့်တာအပြင် အခြား လူသုံးများတဲ့ App တွေအတွက်ငွေဖြည့်တာတွေကို Codashop မှာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဘော်ဒါတို့ရဲ့ ဂိမ်းကစားတဲ့အတွေ့အကြုံကို Next Level ရောက်အောင်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ Codashop ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပိုမိုသစ်လွင်တဲ့ အမိုက်စားပြင်ဆင်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပိုမိုသစ်လွင်တဲ့ Codashop ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်!
Codashop ရဲ့ စိန်လုံး Logo အသစ်က ထူးခြားပြီး ထင်းကနဲပေါ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ အဲဒီစိန်လုံးထဲမှာ Battle Royale ထဲက လေထီးပုံစံပေါ်နေတာကိုရော သတိထားမိလား? Codashop မှာ စိန်တွေအပြင် အခြားသော ဂိမ်းများစွာအတွက်လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေတွေကိုဖြည့်သွင်းနိုင်ပြီး ရှားပါးတဲ့ Skin တွေ၊ Mythic Gun တွေ နဲ့ သိပ်ကိုရှားပါးတဲ့ ကားတွေကို ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကသုံးခဲ့တဲံ လိမ္မော်ရောင်သီးသန့်ပုံစံကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီးတော့ ပိုမိုတောက်ပပြီးအရောင်အသွေးစုံတဲ့ပုံစံသို့ ပြောင်းလဲလိုက်ပါပြီ။
ပိုမိုဆန်းသစ်တဲ့ ပုံစံအသစ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ပိုမိုဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေရှိနေပါတယ်။ ဘော်ဒါတို့ထဲက ရဲရဲတောက် ဖိုက်တာတွေ၊ စနိုက်ပါတွေ၊ Scout တွေနဲ့ Mage တွေရှိတာသိရတဲ့အတွက် သိပ်ကိုအားရပါတယ်။
မကြာမီ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမယ့် CGS ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်ဆွဲချင်လား? Youtube မှာရှိတဲ့ Codashop Plays အစီအစဥ်မှာ နာမည်ကြီးကစားသမားတွေ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကစားကြတာကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ ဒါအပြင် Codashop Blog စာမျက်နှာမှာ ကစားနည်းလမ်းညွှန်တွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ Codashop ရဲ့ Official Facebook နဲ့ Instagram စာမျက်နှာတွေမှာလည်း Season အလိုက်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းတွေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Codashop ရဲ့ ပိုမိုသစ်လွင်တဲ့ပုံစံအသစ်က အားလုံးအတွက် ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ယူဆောင်လာပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘော်ဒါတွေနဲ့အဖွဲ့လိုက် Dragon Tamer Skin(သို့) Mecha ဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့ခံစားချက်မျိုး။ မှင်သက်ဖွက်မီးသေနတ်နဲ့ပစ်လိုက်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်မျိုး။ သင့်ရဲ့ဘော်ဒါက Pharaoh ဝတ်စုံနဲ့အပြတ်ကြမ်းနေတာကိုတွေ့ပြီး အားကျရတဲ့ခံစားချက်မျိုး။ အစရှိတဲ့ခံစားချက်မျိုးစုံကို ခံစားရမှာပါ။ အနိုင်ရတာချင်းအတူတူ Skin အမိုက်စား၊ ဝတ်စုံအလန်းစားတွေဝတ်ထားပြီး အနိုင်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်က ပိုပြီးချိုမြိန်တယ်လို့ Codashop ကယုံကြည်ပါတယ်။
Codashop အသစ်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ ဘော်ဒါတို့လည်း ကျွန်တော်တို့ နဲ့ထပ်တူ စိတ်လှုပ်ရှားနေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Previous article📢 📢 📢 ဆုလက်ဆောင်များစွာ ကံထူးနိုင်မည့် Codashop ရဲ့ “9.9 အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်” လာပါပြီ!
Next articleMartial Arts ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Shang-Chi ကတော့ MARVEL Strike Force မှာ Battle ဆိုင်ဖို့ အသင့်ပါဘဲ!